ဘာစီလိုနာရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုပါ (2016) Androidsis
Android မှအခမဲ့ဘာစီလိုနာရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကိုကြည့်ရှုနည်း၊ Chromecast မှတဆင့်သို့မဟုတ် Smart TV မှ Wifi မှတစ်ဆင့်မြင်ကွင်းကိုပေးပို့နိုင်သည်
ရာစုနှစ်၏ပွဲစဉ်သည်တစ်ဖန်ချဉ်းကပ်လျက်ရှိသည်။ ယခုဘာစီလိုနာရီးယဲလ်မက်ဒရစ်သည်ယခုတွင် Liga BBVA စားပွဲဝိုင်း၊ ဘာစီလိုနာနှင့်ပထမနေရာတွင်ရှိသည့်ရမှတ်များကွာခြားမှုကြောင့်အလွန်စိတ် ၀ င်စားမှုလျော့နည်းသွားသည်။ ဒီကိစ္စဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ပါပဲ။ ဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရမလဲဆိုတာငါပြမယ် ဘာစီလိုနာရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အခမဲ့ သင်၏ Android ဆိပ်ကမ်းများမှသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာကိုသင်၏ Smart TV သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ထားသောရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်သို့ပင်ပို့နိုင်သည် Chromecast ကို သို့မဟုတ်သဟဇာတ devices များ။
သို့ ဘာစီလိုနာရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကိုအခမဲ့ကြည့်ပါ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသော application နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုမှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုကိုရှင်းပြသည့်ဗီဒီယိုနှစ်ခုမှတစ်ဆင့်တင်ပြပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်သံသယကင်းစွာဖြင့်၊ အကောင်းဆုံးအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အားသင်၏ Android မှအခမဲ့ပေးသော TV အားလုံး၏ပါဝင်မှုကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးအနေအထားတွင်သင့်အားတင်ပြမည်ဖြစ်သည်။ တူးမြောင်း Plus အား Liga နှင့်အခြား Canal Plus အားကစားလိုင်းများ။
1 ဘာစီလိုနာရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ကို 2016 အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပုံ
1.1 1st WisePlay၊ ဘာစီလိုနာရီးယဲမက်ဒရစ်ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်
1.2 ဘာစီလိုနာရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ကို YouPlayer PRO အခမဲ့ကြည့်ရှုရန်ဒုတိယအခွင့်အရေး
2 WisePlay ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
3 YouPlayer PRO ကို၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
4 WisePlay စာရင်းများကို download လုပ်ပါ
ဘာစီလိုနာရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ကို 2016 အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပုံ
1st WisePlay၊ ဘာစီလိုနာရီးယဲမက်ဒရစ်ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်
WisePlay သည် Android အတွက်ရိုးရှင်းသောဗွီဒီယိုဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးသောအားသာချက်မှာ၎င်းသည်မတူညီသောဖိုရမ်များမှများစွာသောဤဖိုရမ်များမှရရှိသောကြောင့်ဤလျှောက်လွှာကိုမှော်အတတ်ဖြစ်လာစေမည့်စာရင်းပုံစံကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ WisePlay သဟဇာတစာရင်း ပြီးတော့ငါတို့တတ်နိုင်တော့မယ် ဘာစီလိုနာရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကိုအခမဲ့ကြည့်ပါ Movistar Plus သုံးစွဲသူများအတွက်သာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သော Canal Plus ကိုယ်တိုင်မှဖြစ်သည်။
ရှိခြင်းအပြင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအားကစားလိုင်းများကိုနေ့စဉ်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းငါတို့တွင်လည်းစပိန်တီဗီအားလုံး၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများစာရင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စာရင်းများနှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးရုပ်သံလိုင်းများစာရင်းလည်းရှိသည်။
ဤလိုင်းများအထက်ရှိဗွီဒီယိုတွင် WisePlay ထဲသို့ဖွင့်စရာစာရင်းအသစ်များထည့်ရန်လိုက်နာရမည့်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြပြီး၊ စာရင်းကိုမည်ကဲ့သို့ထည့်ရမည်ကိုအထူးအာရုံစိုက်သည်။ စပိန်စုစုပေါင်းပရီမီယံ အရာကျနော်တို့ရုပ်သံလိုင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်သည့်အတွက်စာရင်းဖြစ်ပါတယ် စုစုပေါင်းပရီမီယံအားကစား လုံးဝအခမဲ့နှင့်ငါတို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အနေဖြင့် ဘာစီလိုနာရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အခမဲ့ စမတ်တီဗီနဲ့ Chromecast ကိုတောင်မှမျက်နှာပြင်ကိုပို့ပေးတယ်။ အကြောင်းကိုလာမယ့်ပို့စ်တွင် WisePlay လိုင်းများ ဘာစီလိုနာရီးယဲမက်ဒရစ်ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့်ပေးမည့်စာရင်းကိုထည့်သွင်းရန်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြခဲ့သည်။
ဒီ option ကိုခြောလျှင် ဘာစီလိုနာရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် သင်၏ Android အတွက်သင့်အတွက်အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပါ။ ရာစုနှစ်၏ဂိမ်းကို Android terminal မှမည်သည့် Android terminal မှမဆိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင်ရွေးချယ်စရာများပါ ၀ င်သည့်အရည်အသွေးမြင့် option တစ်ခုဖြစ်သည့်နောက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် application ကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ မျက်နှာပြင်ကို Chromecast နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောတီဗီများမှတဆင့်ပေးပို့ခြင်း.
ဘာစီလိုနာရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ကို YouPlayer PRO အခမဲ့ကြည့်ရှုရန်ဒုတိယအခွင့်အရေး
အကယ်၍ သင်ပထမ ဦး ဆုံးရွေးစရာကခင်ဗျားကိုယုံကြည်စိတ်ချရုံမကဘာစီလိုနာရီးယဲမက်ဒရစ်ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်၊ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်နည်းတူအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသောကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။ ကနေတဆင့်ရရှိနိုင် YouPlayer PROAndroid အတွက်အခြားမီဒီယာဖွင့်စက်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည် ဘာစီလိုနာရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုပြီး Chromecast သို့မဟုတ်သဟဇာတဖြစ်သော Smart TV များသို့ပင်မျက်နှာပြင်ပေးပို့ပါ.
ငါသည်သင်တို့ကိုဤလိုင်းများအထက်ရုံငါစွန့်ခွာသောပူးတွဲဗီဒီယိုထဲမှာ, ငါအချိန်အကြာကြီးမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ, ငါရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြပါ YouPlayer PRO ၏ကူးယူခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း ဒီဘာစီလိုနာရီးယဲမက်ဒရစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ android terminal မှအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်ကို Chormecast နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောရုပ်မြင်သံကြားသို့ပင်ပေးပို့နိူင်သည်။
WisePlay ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
YouPlayer PRO ကို၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့် YouPlayer PRO ကိုရယူပါ
WisePlay စာရင်းများကို download လုပ်ပါ
ဤစာမူကိုရေးနေခြင်း သင်အဘို့အ link ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် WisePlay အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အမျိုးမျိုးသောစာရင်းများကို download လုပ်ပါMovistar + channel အားလုံးနှင့်အတူစပိန် HD Premium စာရင်းအပါအ ၀ င်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android မှအခမဲ့ဘာစီလိုနာရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကိုကြည့်ရှုနည်း၊ Chromecast မှတဆင့်သို့မဟုတ် Smart TV မှ Wifi မှတစ်ဆင့်မြင်ကွင်းကိုပေးပို့နိုင်သည်
အကယ်၍ သင်ဒီနေ့ထုတ်ဝေနေပြီဆိုလျှင်စနေနေ့မတိုင်မီ၎င်းတို့အားဖြိုဖျက်ကြောင်းကျွန်ုပ် fix လိမ့်မည်။
Iván Rolo အားပြန်ကြားပါ
Iphones, Androids & Accessories ဟုသူကပြောသည်
ငါ android အသစ်တစ်ခုရတော့မည်, ဤလမ်းကြောင်းကိုသွားစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
Iphones, Androids & Accessories သို့ပြန်ပြောပါ
Apps များနှင့်ဝဘ်များတွင် virtual reality ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် Google သည် VR View ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Pelis Magnet, စပိန် PopCorn သည်စီးရီးနှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်